Al-shabaab oo nin siyaasi ah ku dilay Kismaayo, kadib markii lagu eedeeyay xiriir u la leeyahay dawladda federaalka. – Radio Daljir
Abriil 15, 2011 12:00 b 0
Kismaayo, April 15 – Ururka Al-shabaab ayaa magaalada Kismaayo ku dilay siyaasi la oran jiray Xareed Cali Dur-dur kaasi oo la sheegay in muddo labo todobaad hor ah ay ciidamada Al-shaab ka kaxeeyeen gurigiisa oo ku yaalla xaafadda Aargada ee magaadaasi Kismaayo.
Siyaasiga dhintay ayaa maydkiisa la soo dhigay isbitaalka guud waxaana isla shalayba (Khamiis) lagu aasay magaaladaasi oo uu ku sugnaa muddooyinkii la soo dhaafay.
Sida ay Daljir u sheegeen dad jooga magaalada Kismaayo Marxuunka ayaa lagu eedeeyey inuu xiriir dhaw la lahaa dawladda federalka KMG ah ee Soomaaliya, waxaana uu ka mid ahaa tiro dad ah oo shabaabku ka qab-qabteen magaaladaasi.
Xarakada Al-shabaab ayaa horay siyaasiyiin ugu dilay Kismaayo kuwaasi oo ay ku eedeeyey inay si hoose ula shaqaynayeen dawladda federalka, balse ma jiro war la xiriira dilka marxuun Dur-dur oo ka soo baxay Al-shabaab.
Biyo-dhaamis ka socda degmada Burtinlle xilli ay ka soo darayaan saamaynta abaaraha.